Atụmatụ nkuzi: Mkpokọta - Nkwụghachi Regwọ-Sexhụnanya Mmekọahụ na Internetntanetị
Home Atụmatụ Ihe Mmụta: Iwu
Iji nyochaa ọdịnaya nke ihe mmụta ọ bụla, pịa oyiyi ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe naanị nkuzi na ịntanetị naanị ma ọ bụ naanị gbasara mmekọahụ, lee nhọrọ dị mkpa n'okpuru.
Ihe omumu a di na mbipute nke UK, American Edition na International (British English) Edition.
Pornographyntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ setịpụrụ nwere nkuzi atọ gbasara akụkụ dị iche iche nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Anyị agbakwunyela na nkuzi nkuzi n'efu.
Ntanetị Intanet Intanet, England, Wales na Northern Ireland Edition
Nchịkọta Intanet na-akpali agụụ mmekọahụ, Akwụkwọ Scottish
Mmekọahụ bụ isiokwu dịgasị iche iche karịa ka esi egosi na anya mbụ. Ntọala a na enye ndi nkuzi ohere inyocha okwu dị iche iche ya na ụmụ akwụkwọ ihe karịrị atọ n ’nchekwa ma nwekwa ohere zuru oke maka ntụle na mmụta.